XAGEE LAGA DHIGAA ORCHID AQALKA: MEESHA AY TAHAY IN UBAXU KU YAALAY GURIGA, WAXAA LAGU HAYN KARAA JIKADA AMA LAGU RAKIBAY QABOOJIYAHA, TAAS OO DAAQADUNA AY UGU FIICANTAHAY KORITAANKA? - SOOSAARKA DALAGGA
Meelaha ugu fiican ee orchids ee aqalka. Xagee lagu geyn karaa iyo meesha aad ku haysan kartid ubax?
Ma aha sir ah in orchids aad u qurux badan, laakiin waqti isku mid ah ubax aad u xun.
Waxay dalbanayaan ma aha oo kaliya in ay daryeelaan, laakiin sidoo kale meesha ay ku yaalaan, sababtoo ah hal meel ayaa orchid si fiican u koraan oo ubaxyada, iyo mid kale wuxuu u engegi doonaa oo u dhiman doonaa.
Sidaa darteed, doorashada ee goobta geedka this waa in si aad u dhab ah loo qaato.
Maxaa go'aamiya doorashada xaafadda?
Qodobka ugu muhiimsan ee doorashada meel ay ku habboon tahay in lagu dhejiyo orchid guri guri ah waa baahida loo qabo qadar ballaadhan. Arrintan awgeed Ha dhigin ubaxa meel ay qorraxda maalinta oo dhan iftiimiso. Sida ay yiraahdaan - "ogaan qiyaasta". Sidaa daraadeed, doorashada ugu fiican waa aag leh iftiin kala duwan, ama si dabiici ah u iftiimaya dhinaca qoraxda.
Doorashada ugu fiican waa galbeedka ama dhinaca bari ee guriga. Haddii si lama filaan ah orchid ay tahay in uu ku noolaado dhinaca woqooyiga, ka dibna waa lagama maarmaan in la siiyo nalalka dabiiciga ah, taas oo ay ugu wacan tahay dhirta ay u magdhabi doonto la'aanta.
Ku dhowaad qolka orchid waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso heerkulka hawada. Nooc kastaa way kala duwan tahay, laakiin noocyada ugu badan ee heerkulka wanaagsan ee xagaaga waa 25-30 ° C, iyo jiilaalka - 20-25 ° C. Farqiga heerkulka u dhaxeeya habka habeen iyo maalin waa inuusan ka badan 5 ° C.
Orchid wuxuu dalbanayaa qoyaan hawo leh. Qoyaanku waa inuu ahaado ugu yaraan 60% oo aan ka badnayn 90%. Haddii aysan suurtogal ahayn in lagu hayo xaaladahaan, waxaa lagama maarmaan ah in la abuuro astaamo - adigoo saaraya saxaarada hoosteeda dhoobada dhoobada dhoobo, taas oo markaa laga dhergo biyo.
Digniin! Xaaladaha xabsiga ee noocyada kala duwan ee orchids way kala duwan yihiin. Halka nooc ka mid ah uu noqon doono mid raaxo leh, mid kale wuxuu yeelan doonaa gebi ahaanba.
Baro qawaaniinta ku saabsan beerista fasalada xayawaanka ee phalaenopsis iyo sida loo daryeelo guriga dhexdiisa waxaa laga heli karaa halkan.
Waa maxay daaqada ay tahay ubaxa u taagan?
Sida hore loo qorey - nooc kasta oo ka mid ah ayaa jira muuqaalada kala duwan markaad dooranayso meel. Iyo Orchid waxay soo jeedin kartaa mulkiilaha, halkaasoo uu dareemo ka fiican, iyo halka - ka sii xun. Tusaale ahaan, waxay u egtahay in kala iibsiga xagga waqooyiga ee daaqada bari uu ubaxi doono 2-3 jeer sannadkii ama adigoo sii deynaya dhawr-xabbo mid ah.
Sidaa darteed, ka hor inta aan la dooran warshad, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado meesha ugu haboon ee nolosheeda. Waxaa jira kuwo badan oo ka mid ah dhinacyada caalamka:
Daaqadda koonfurta. Nidaamka ugu guulaha badan ee orchid. Waxay ku jirtaa daaqadan in ay hesho qadarka loo baahan yahay nalka qaboobaha. Caleemaha cusub iyo peduncooyinka ayaa soo bixi doona xataa haddii aan lahayn iftiin dheeraad ah. Si kastaba ha noqotee, waa in aad taxaddar u yeelatid guga iyo xagaaga. Maadaama caleemuhu guban karaan marka ay u soo baxaan qoraxda tooska ah. Tani waxay saldhig u ah, geedka waa in la gooyaa waqti kulul.
Dhibaatooyinka noocan oo kale ah waa dabeecadda dhirta kuwaas oo substrate-ka inta badan ka baxaan. Sidaa darteed, substrate waa in had iyo jeer la dhigo qoyan, sababtoo ah waxay yaraynaysaa khatarta gubashada. Waxa kale oo suurtogal ah in shaqeyn aan caadi ahayn ee xididada ay sabab u tahay iftiinka qorraxda.
Daaqadda bari. Daaqadani waa doorasho fiican xagaaga, maaddaama qoraxda tooska ah ay halkan ka ifkaeyso 8 ilaa 12 subaxdii. Dariishada daaqadda ku jirta waxay noqon kartaa madow xilliga jiilaalka.
Daaqadda galbeed. Ma aha ikhtiyaarka goobta aadka u wanaagsan, sida qorraxda daaqadani ay soo ifbaxdo 3 ilaa 4 saacadood maalintii. Xilliga jiilaalka waa madow.
Daaqadda Waqooyi. Goobta waqooyiga waa nasiib darro noocyada kuleylka ah maxaa yeelay ma laha iftiin ku filan xagaaga iyo jiilaalka. Laakiin haddii daaqadaha oo dhan ee guriga ku wata dhinaca woqooyiga, ka dibna waa lagama maarmaan in la abuuro iftiin macmal ah.
Caawimaad! Markaad dooratid daaqad for orchid waxaad u baahan tahay inaad ilaaliso dhaqdhaqaaqa iftiinka qoraxda inta lagu jiro maalinta.
Xaggee ayuu ku xiran yahay waqtiga sanadka?
Qormo kale oo muhiim ah marka la dooranayo meesha orchid waa waqtiga sanadka.
Xilliga jiilaalka iftiinka iftiinka ayaa aad u yaraaday. Tani waxay si xun u saameeyaa geedka, sidaas darteed waa lagama maarmaan in la bixiyo iftiin macmal ah oo dheeri ah. Xaaladdan oo kale, nalalka dhaadheer ayaa kaa caawin doona, kaas oo ah in lagu dhajiyo meel fog 20-30 cm geedka. Sidoo kale waa inaysan jirin wax qorshe ah, haddii kale waxaa dhici karta in barafoobiddu ay u badantahay. Ku saabsan sida loo daryeelo orchid xilliga dayrta-qaboobaha, waxaan halkan u sheegnay.
Heesaha ayaa sidoo kale leh saameyntooda. Haddii dherigu ka sarreeyo batteriga, waxaa lagama maarmaan ah in lagu sii qulqulo geedka, maaddaama hawada batteriga ay qalalan tahay. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo hawada ku wareegsan agagaarka xayawaanka, laakiin aan lahayn caleemo, sababtoo ah way kala jajabi karaan.
Wakhtiga guga - xagaaga Dhirta waa in laga ilaaliyaa gubashada iyagoo shooga. Intaa waxaa dheer, ka dib xilliga qaboobaha, si tartiib tartiib ah oo loogu talagalay iftiinka waxaa looga baahan yahay qalabka caadiga ah ee geedi-socodka. Ayadoo la siinayo iftiin raaxo leh, waxaa suurtagal ah in la diyaariyo orchid on balakoonka dhalada leh. Waxaa lagama maarmaan ah in laga taxadiro nidaamyada kuleylka iyada oo geedku uu daciif yahay oo uu noqonayo mid aad u nugul dadka jilicsan.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyowga ku saabsan daaqaduhu si fiican u doortaan orchid:
Waa maxay qaabka ugu fiican ee ubaxa guriga?
Wixii soo saarida orchids, waxaa jira meelo badan oo ku habboon oo aad dhigi kartid warshadan:
Bartamaha qolka fadhiga. Qolka fadhiga waa wadnaha guriga, sidaa daraadeed meeshan waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee soo saarista orchids. Warshadani waxay ka muuqan doontaa miiska kafeega, madadaalada, laabta sawirada ama miiska.
Maqaarka Sidoo kale waa meel aad u fiican, iyada oo la bixinayo waa mid ballaaran oo u ogolaanaya iftiinka dabiiciga ah ee daaqada. Goob-deg ah - miiska ku dhow agagaarka saxda ah ama meel u dhow qubayska.
Daaqada Meeshan, sida kor ku xusan, waxay ku habboon tahay xaaladaha qaarkood, iyadoo ku xiran nooca orchid.
Miyaan ku hayn karaa qolka jiifka ama jikada, tusaale ahaan, qaboojiyaha?
Su'aashu waxay soo baxaysaa haddii ay suurtagal tahay in la geliyo orchid qolka hurdada, jikada ama qaboojiyaha? Jawaabtu waa haa, waad awoodi kartaa, oo ku xiran xaaladaha oo dhan.
Maalmahan waxa ay noqotey mid aad u qurux badan oo loo dhigo orchids qolalka jiifka. Inta badan, waxaa la dhigayaa miisaska sariirta, laakiin ka hor intaadan hubin in uu jiro iftiin ku filan oo ku yaala orchid. Intaa waxaa dheer, laydhka habeenku ku dari doonaa nalalka, xitaa macmal.
Qaar badan oo beeralayda ubaxa ah waxay leeyihiin orchid gudaha jikada. Waxaa jira meelo badan oo loogu talagalay: daaqadaha, miiska cuntada, miiska baraha.
Dadku waxay inta badan xiiseynayaan arinta ku saabsan inay orchid ku ridaan qaboojiyaha. Oo waa in la sheegay in xagaaga xaga warshad this lagu ridi karaa qaboojiyaha, tan iyo meeshan waxaa laga ilaalin doonaa qorraxdu si toos ah. Waxaa lagula talinayaa in baaritaanada joogtada ah ee substrate ee qoyaanka. Xilliga jiilaalka, waa inaadan haysanin orchid qaboojiyaha, tan iyo muddadan muddadaas waxay noqon doontaa mid aad u madow.
Meesha aanad ku kori karin?
Waa mid caqli-gal ah in la qaato marka laga reebo meelo ku habboon goobta orchids, waxaa sidoo kale jira habooneyn. Mid ka mid ah kuwan waa meel u dhow batteriyada iyo nidaamyada kuleylka. Meelahaas waa in laga fogaadaa. Looma baahna inaad gashato dhirta daaqadda inta badan la furo, ama waxaa jira qabyaalad. Sababtoo ah xaqiiqda ah in xididdada orchid ay sidoo kale ku lug leeyihiin photosynthesis waxaa laga mamnuucay in ay ku ridaan meelaha leh qadar yar oo iftiin ah ama la'aanta.
Dhibaatooyinka noocan oo kale ah waxay keeni karaan doorasho khalad ah?
Haddii aad doorato meel qalad ah, dhirta ayaa bilaabi doonta inay bixiso "calaamado". Orchid ayaa qalajin kara, buraashka ku tuuri kara, kuus ku daboola xab. Xaaladaha badankood, ubaxa waa la badbaadin karaa. Laakiin waxaa jira wax ka reeban - hypothermia. Dhimashada orchid waa ku filan, macno ahaan, dhowr daqiiqadood oo ah hypothermia.
Markaad sii kordhineyso orchids guriga, su'aalo badan ayaa soo baxa, sidaas darteed waxaan kugula talinaynaa in aad la tashato qalabka kale ee ku saabsan sida biyaha, dib udajinta, sida loo quudiyo ubax, iyo sidoo kale xaaladaha manjooyin loo isticmaalo.
In kasta oo xaqiiqda ah in orchid loo tixgeliyo in uu yahay warshad aad u awood leh, waa, dhab ahaantii, ma aha ka awood badan ka badan kuwa kale. Xadidnimadeeda waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in ay ku noolaanayso xaalado kala duwan marka loo eego kuwa lagu xannibay. Laakiin dhammaan dareemayaasha iyo dadaalada lagu kharash gareeyay orchid ka dibna si buuxda u bixinayaan.